Dagaal xoogan oo u dhaxeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo ka dhacay gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDagaal xoogan oo u dhaxeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo ka dhacay gobolka Mudug
July 4, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Dagaal xoogan oo u dhaxeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo ka dhacay gobolka Mudug. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaal xoogan oo u dhaxeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa saakay oo Arbaco ah ka dhacay deegaano kuyaala gobolka Mudug.
Dagaalka ayaa ka dhacay deegaano miyi ah oo hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii dadka deegaanka ay diideen in ay Al-Shabaab ay ku wareejiyaan caruurtooda si ay u askareeyaan.
Dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh, sida ay sheegeen ilo-wareed dhanka amniga ah.